आशिषको 'boutमा तिमीहरूको बुझाई कस्तो छ? | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
यद्यपि यस युगमा जन्मेका मानिसहरू शैतान र अशुद्ध भुतात्माहरूद्वारा भ्रष्ट पारिएता पनि, त्यस्तो भ्रष्टताले तिनीहरूको निम्ति अत्यन्त ठूलो मुक्ति पनि ल्याएको छ जुन मुक्ति पहाडहरू र पशुधनले भरिएको बेंसी अनि अय्यूबको अथाह सम्पत्तिभन्दा पनि ठूलो छ, अनि अय्यूबले तिनको परिक्षाहरूपछि प्राप्त गरेको यहोवालाई हेर्ने आशिषभन्दा पनि ठूलो छ। अय्यूब मृत्युको परिक्षा भएर गएपछि मात्रै तिनले यहोवा बोल्नुभएको सुने अनि तिनले भुमरीमा यहोवाको आवाज सुने। तथापि, तिनले यहोवाको मुहार भने देखेनन्, अनि तिनले उहाँको स्वभावलाई जानेनन्। अय्यूबले प्राप्त गरेको कुरा केवल भौतिक सम्पत्ति थियो जसले तिनलाई शारीरिक सुखशयलहरू तथा वरिपरिका सबै शहरहरूमा रहेकाहरूमध्ये सबैभन्दा सुन्दर सन्तानहरू, साथै स्वर्गको स्वर्गदूहरूको सुरक्षा प्रदान गर्यो। तिनले यहोवालाई कहिल्यै देखेनन् अनि यद्यपि, तिनी धर्मी कहलाइएको भएतापनि, तिनले यहोवाको स्वभावलाई कहिल्यै जानेनन्। अनि यद्यपि, आजका मानिसहरूका भौतिक आनन्दहरू अस्थायी रुपले थोरै छन् भन्न सकिएतापनि वा बाहिरी संसारको वातावरण शत्रुतापूर्ण भएतापनि, म मेरो स्वभाव देखाउँछु जुन मैले प्राचीनकालदेखि मानिसलाई कहिल्यै प्रकट गरेको छैन र जुन सधैँ गुप्त रहेको छ, साथै अनन्तकालका रहस्यहरू ती मानिसहरूलाई देखाउँछु जो सबैभन्दा दीन छन् तर जसलाई मैले मेरो सबैभन्दा ठूलो मुक्ति दिएको छु। यसबाहेक, मैले यी कुराहरू प्रकट गरेको पहिलोपल्ट हो; मैले त्यस्तो काम पहिले कहिल्यै गरेको छैन। यद्यपि तिमीहरू अय्यूबभन्दा अति नै निम्न भएतापनि, तिमीहरूले हासिल गरेको र तिमीहरूले देखेको कुराले उसलाई माथ दिएको छ। यद्यपि, तिमीहरू सबै प्रकारका कष्टहरू भएर गएको, र सबै प्रकारको यातनालाई अनुभव गरेको भएतापनि, त्यो कष्ट अय्यूबको जस्तो बिलकुल छैन; बरु यो न्याय र ताड़ना हो जुन मानिसहरूले तिनीहरूका विद्रोहीपनाको कारणले, तिनीहरूको विरोधको कारणले, अनि मेरो धर्मी स्वभावको कारणले पाएका हुन्; यो धर्मी न्याय, दण्ड र श्राप हो। अर्कोतिर, अय्यूब इस्राएलीहरूको माझमा एउटा धर्मी मानिस थिए जसले यहोवाको ठूलो प्रेम तथा कोमलता पाए। तिनले कुनै खराब कामहरू गरेका थिएनन्, अनि तिनले यहोवाको विरोध गरेनन्; बरु, तिनी विश्‍वासयोग्यतापूर्वक यहोवाप्रति समर्पित थिए। तिनको धार्मिकताको कारणले, तिनी परिक्षाहरूमा परेका थिए, अनि तिनी अग्निमय परिक्षाहरू भएर गए किनकि तिनी यहोवाका एक विश्‍वासयोग्य सेवक थिए। आजका मानिसहरू तिनीहरूका अशुद्धता र अधार्मिकताको कारणले मेरो न्याय तथा श्रापमा परेका छन्। यद्यपि, तिनीहरूको कष्ट अय्यूब भएर गएको कष्टको तुलनामा केही होइन जब तिनले आफ्नो पशुधन, आफ्नो सम्पत्ति, आफ्ना नोकरहरू, आफ्ना सन्तानहरू अनि तिनले प्रिय ठानेका सबै गुमाए, तिनीहरूले भोग्ने कुरा अग्निमय शुद्धिकरण र ज्वलन हो। अनि अय्यूबले भोगेको भन्दा त्यसलाई गम्भीर बनाउने कुरा यो हो कि त्यस्ता कष्टहरू मानिसहरू कमजोर भएकाले घटाइँदैनन् अथवा हटाइँदैनन्; बरु, ती लामो समयसम्म रहन्छन्, अनि मानिसहरूको जीवनको अन्तिम दिनसम्म नै रहिरहन्छन्। यो दण्ड, न्याय र श्राप हो; यो दयाविनाको ज्वलन हो, अनि अझबढी, यो मानवजातिको न्यायोचित “उत्तराधिकार” हो। मानिसहरू यसैका हकदार छन्, अनि यहाँ नै मेरो धर्मी स्वभाव प्रकट हुन्छ। यो नै एउटा ज्ञात तथ्य हो। तथापि, मानिसहरूले जुन ठूलो कुरा हासिल गरेका छन्, त्यसले आज तिनीहरूले भोग्ने कष्टलाई माथ गर्दछ। जुन कष्ट तिमीहरूले भोग्छौ, त्यो केवल तिमीहरूको मूर्खताको परिणामस्वरुप आएको एउटा असफलता हो, जबकि जुन तिमीहरूले हासिल गरेका छौ, त्यो तिमीहरूको कष्टभन्दा सय गुणा ठूलो छ। पुरानो करारमा इस्राएलको व्यवस्थाहरूअनुसार, ती सबै जसले मेरो विरोध गर्छन्, ती सबै जसले मलाई खुल्लमखुल्ला न्याय गर्छन्, अनि ती सबै जसले मेरो मार्ग पछ्याउँदैनन्, र जसले साटोमा मलाई अपवित्र बलिदानहरू चढाउने साहस गर्छन्, तिनीहरू निश्चय नै मन्दिरमा आगोले जलाइनेछन् वा केही चुनिएका मानिसहरूद्वारा ढुङ्गाले हानेर मार्नेछन् र तिनीहरूका आफ्नै कुलका सन्तानहरू अनि अन्य नजिकका कुटुम्बले मेरो श्राप भोग्नेछन्। आउने जीवनमा, तिनीहरू स्वतन्त्र हुनेछैनन्, तर मेरा दासहरूका पनि दासहरू हुनेछन्, अनि म तिनीहरूलाई अन्यजातिहरूको माझमा निर्वासित हुनका निम्ति धपाइदिनेछु, अनि तिनीहरू आफ्नो जन्मभूमिमा फर्कन सक्नेछ्रैनन्। तिनीहरूका कार्य तथा व्यवहारमाथि आधारित गर्दा, आजका मानिसहरूले सहने कष्ट इस्राएलीहरूले सहेको कष्ट जतिको पनि गम्भीर छैन। तिमीहरूले हाल सहिरहेको कष्ट प्रतिशोध हो भन्ने भनाइ न्यायसङ्गत छैन किनकि तिमीहरूले रेखा नाघिसकेका छौ। यदि तिमीहरू इस्राएलमा भएको भए, तिमीहरू अनन्त पापीहरू हुने थियौ, अनि इस्राएलीहरूद्वारा लामो समय अघि नै टुक्रा टुक्रा पारिने थियौ अनि यहोवाको मन्दिरमा स्वर्गबाट आगोद्वारा भष्म पारिने थियौ। तिमीहरूले अहिले हासिल गरेको कुरा के हो? तिमीहरूले के पाएका छौ, र तिमीहरूले के आनन्द पाएका छौ? मैले तिमीहरूमा मेरो धर्मी स्वभाव प्रकट गरेको छु, तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो हो कि मैले मानवजातिलाई उद्धार गर्नको निम्ति मेरो धैर्य प्रकट गरेको छु। कसैले यसो भन्न सक्छ कि मैले तिमीहरूमा गरेको काम धैर्यको काम हो; यो मेरो व्यवस्थापनको खातिर गरिएको हो र, यसबाहेक, यो मानवजातिको आनन्दको खातिर गरिएको हो।
यद्यपि, अय्यूब यहोवाका परिक्षाहरूबाट भएर गएको भएतापनि, तिनी केवल एउटा धर्मी मानिस थिए जसले यहोवालाई आराधना गर्दथे। ती परिक्षाहरूबाट भएर जानु पर्दा पनि, तिनले यहोवाको बारेमा गुनासो गरेनन्, अनि तिनले उहाँसितको जम्काभेटलाई बहमूल्य सम्झे। आजका मानिसहरूले यहोवाको उपस्थितिलाई प्रिय नठान्ने मात्र होइन, तर तिनीहरूले उहाँको देखा पर्ने घटनालाई इन्कार गर्छन्, घृणा गर्छन्, त्यसको बारेमा गुनासो गर्छन् र खिल्ली उडाउँछन्। के तिमीहरूले ज्यादा हासिल गरेका छैनौँ र? के तिमीहरूको कष्ट साँच्चि नै साह्रै ठूलो भएको छ र? के तिमीहरू मरियम र याकूबभन्दा सौभाग्यशाली भएका छैनौ र? अनि के तिमीहरूको विरोध साँच्चि नै साधारण रहेको छ र? मैले तिमीहरूबाट चाहेको र मैले तिमीहरूबाट मागेको कुरा के साह्रै ठूलो र धेरै भएको छ र? मेरो क्रोध ती इस्राएलीहरूमाथि मात्रै खनिएको थियो जसले मेरो विरोध गरे, तिमीहरूमाथि यो प्रत्यक्ष खनिएको छैन; तिमीहरूले पाएको केवल मेरो दयाविनाको न्याय र प्रकाशहरू मात्रै हुन्, साथै अनवरत अग्निमय शुद्धिकरण पनि। यसको बावजूद पनि, मानिसहरूले मलाई विरोध गर्न र खण्डन गर्न जारी राख्छन्, अनि तिनीहरूले रत्तिभर अधीनताविना त्यसो गर्छन्। केही यस्ता पनि छन् जसले मदेखि दूरी राख्छन् र मलाई इन्कार गर्छन्; त्यस्ता मानिसहरू कोरह र दातानको दलभन्दा उत्तम छैनन् जसले मोशाको विरोध गरे। मानिसहरूको हृदय धेरै कठोर छ, अनि तिनीहरूको स्वभाव धेरै हठी छ। तिनीहरूले कहिल्यै आफ्ना पुराना मार्गहरू परिवर्तन गर्दैनन्। म भन्छु, तिनीहरू मध्यदिनको उज्यालोमा निर्वस्त्र राखिएका वेश्याहरू झैँ हुन्, र मेरा वचनहरू यस विषयमा कठोर भएको हुनाले सायद ती “कानको निम्ति अप्रिय” लाग्न सक्छ, यसले मानिसहरूका स्वभावहरूलाई दिनको उज्यालोमा उदाङ्गो गर्दछ—तापनि तिनीहरूले केवल आफ्ना शिरहरू मात्र हल्लाउँछन्, आँशुका केही थोपाहरू झार्छन् अनि आफैलाई जबर्दस्ती अलिकति दुःखी महसुस गराउँछन्। यो बितिसकेपछि, तिनीहरू पहाडहरूमा बस्ने जङ्गली पशुहरूका राजा जस्तै क्रूर हुन्छन्, अनि तिनीहरूसित अलिकति पनि सचेतना छैनन्। त्यस्तो स्वभाव भएका मानिसहरूले कसरी तिनीहरू अय्यूबभन्दा सय गुणा सौभाग्यशाली छन् भनी जान्न सक्छन्? कसरी तिनीहरूले महसुस गर्न सक्छन् कि तिनीहरू जुन कुरामा आनन्दित छन्, ती आशिषहरू हुन् जुन पूरै युगहरूमा मुश्किलैले मात्र देखिएका छन् र कसैले पनि यस अघि आनन्द लिएका छैनन्? कसरी मानिसहरूका विवेकहरूले त्यस्ता आशिषहरूलाई अनुभूत गर्न सक्छन्, जुन आशिषहरूमा दण्ड सम्मिलित हुन्छ? स्पष्ट रुपले भन्दा, मैले तिमीहरूबाट चाहेको कुरा केवल यति मात्र हो कि तिमीहरू मेरो कामको नमूनाहरू, मेरो सम्पूर्ण स्वभाव तथा कामहरूका गवाहीहरू हुन सक ताकि शैतानले दिने कष्टहरूदेखि तिमीहरू स्वतन्त्र हुन सक्नेछौ। तथापि, मानिसहरू सधैँ मेरो कामदेखि विकर्षित हुन्छन् अनि जानाजान यसप्रति वैरी हुन्छन्। कसरी त्यस्ता मानिसहरूले इस्राएलका व्यवस्थाहरू फेरि ल्याउन अनि इस्राएलमाथि मैले ल्याएको क्रोध तिनीहरूमाथि ल्याउन मलाई उत्तेजित नगरी रहन सक्लान्? यद्यपि, तिमीहरूमध्ये धेरै छन् जो मप्रति “आज्ञाकारी तथा विनीत” छन्, त्यहाँ कोरह दलका किसिमका मानिसहरू पनि धेरै छन्। एकपल्ट मेरो पूरा महिमा प्राप्त गरिसकेपछि, म स्वर्गबाट आगो पठाएर तिनीहरूलाई भष्म गर्नेछु। म मानिसहरूलाई अबदेखि मेरा वचनहरूले मात्रै मानिसहरूलाई सजाय दिनेछैन भनी तिमीहरूले जान्नुपर्छ; बरु इस्राएलको काम गर्नुभन्दा अघि, मलाई विरोध गर्ने र धेरै अघि मैले निमिट्यान्न गरेको “कोरहको दल” लाई म पूर्ण रुपले भष्म गरिदिनेछु। मानवजातिलाई मेरो आनन्द लिने अवसर अब उप्रान्त हुनेछैन; बरु तिनीहरूले केवल स्वर्गबाट मेरो क्रोध र आगोका ज्यालाहरू देख्नेछन्। म सबै प्रकारका मानिसहरूका विभिन्न परिणामहरू प्रकट गरिदिनेछु, अनि म तिनीहरू सबैलाई समूहहरूमा वर्गीकरण गर्नेछु। म तिनीहरूको हरेक विद्रोही कार्यलाई ध्यान दिनेछु अनि त्यसपछि मेरो काम सिध्याउनेछु ताकि मानिसहरूका परिणामहरू पृथ्वीमा हुँदा मेरो जुन फैसलामा आधारित थियो, र साथै मप्रति तिनीहरूको आचरण जस्तो थियो, त्यसैले निर्धारित गर्नेछन्। जब समय आउँछ, तिनीहरूको परिणामहरूलाई परिवर्तन गर्ने कुनै कुरा हुनेछैन। मानिसहरूले आफ्ना परिणामहरू आफै प्रकट गरुन्! तब, म मानिसहरूका परिणामहरूलाई स्वर्गीय पिताको हातमा सुम्पिदिनेछु।